Xukuumada Miyeey Cafiyeen Horjoogayasha Muhaajiriinta & Kuwa Soomaalida? | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Xukuumada Miyeey Cafiyeen Horjoogayasha Muhaajiriinta & Kuwa Soomaalida?
11 April, 2012-Wasiirka 1aad ee Dowlada KMG ah oo maantay wareysi siiyay Wakaalada wararka ee AP ayuu ku sheegay bal haddii ay dili lahayd hadii uu u soo gacan galo Ciidamada dowladiisa Horjooge Abuu Mansuur Al-Amriiki oo ka tirsan Horjoogayaasha ajaaniibta ee Alshabaab iyo haddii kale, jawaabtiisuna waxa ay ahayd in aysan jirin sabab loo dilo ninkani “haddii uu ka harro falalka amaan darada ee uu dalka ka wado”.
Maalmahaan ayaa Wararka ayaa aad ay u hadal hayeen warar aan kala joogsi laheyn ee uu Mr.C/maan Faroole ku sheegayay in tirto badan oo ka tirsan Maleeshiyaadka Muhaajiriinta iyo kuwa Shababka ay u talaabeen buuraha Golis oo ku yaal degaanada u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland, Dr. Cabdiwali Gaas Wuxuu wakaaladdaani, u sheegay in Horjoogahababkayaashii Kooxda Shababka ay u qaxeen dhanka buuraha Galgala.
Dhowaan waxaan faafinay war la xiriiras in Horjooge Fu’aad Shongole oo ka mid ah Horjoogayaasha shabaabka, kana soo jeeda deegaanada Puntland uu u qaxay dhanka buuraha Galgala.
Cumar Xamaami oo ah muwaadhin Maraykan ah ayaa cajalad muuqaal ah oo uu soo saaray ku sheegey in uu naftiisa u baqayo, kana yaabayo in ay shabaabku dilaan, wixii warkaasi ka dambeeyey wax war ah lagama maqal.
Horjoogayaasha shabaabka iyo Maleeshiyaadkooda ayaa u baxsanaya gobolada waqooyi xili lagaga itaal roonaaday dagaalo koonfurta lagula galay.
Abuu Mansuur Al-Amriiki ayaa waxa uu ka midyahay dadka ku jira liiska dadka loogu doondoonista badanyahay ee Maraykanka uu raadinayo, mana jirto sabab haba yaraatee uu Maraykanka ku cafinayo, xitaa haddii uu ka baxo howlaha uu gacmaha uu kula jiro.
Laakiin Soomaaliya oo uu ninkani ka galay dambiyadda ugu badan, uguna waaweyn ayaa u muuqata in ay cafis u fidineyso ninkani iyo dabcan kuwa kale oo la mid ah.
Haddii ay dhacdo in cafis loo fidiyo Cumar Xamaami waxa ay taasi ilinka u furi kartaa dambiilayaal kale oo waaweyn in ay ka badbaadaan caganka sharciga iyo garsoorka, lana baxsadaan dambiyada ay galeen. Kuwa badan oo ka mid ah ragga lagu eedeynayo dambiyada waaweyn ee ay ka midyihiin qaraxyaddii ismiidaaminta ah ee dalka ka dhacay ayaa haatan ah kuwa baxsanaya, islamarkaasina galaya meelo ay ka midyihiin buuraha Golis sida aan kor ku xusnay.
Somaliland iyo Alshabaab
Madaxa Maamul-goboleedka Puntland oo hadalkiisa maalmahaan laga xiiso dhigay ayaa qeylo dhaan ku sheegay in nin dadka khaarijiya oo shabaabka ka tirsan lagu arkay magaalada Laascaanood, balse aysan jirin wax dadaal ah oo ninkaasi lagu soo qabanayay. Hadalkaasi inkasta oo uusan carrabka ku dhufanin, hadane waxaa loo fahmay in uu Faroole farta ku fiiqayay in maamulka halkaasi ka taliya uu wax ka ogyahay dhaqdhaqaaqa Alshabaab.
Faroole waxa uu laakiin sheegey in shabaabku ay ka faa’iideysanayso amni xumada ka jirta gobolada Sool iyo Sanaag, iyagoo dhanka badda kasoo galaya waxayna isticmaalayaan doomaha dheereeya.
Erayadaan ka soo baxaaya Wasiirka 1aad ee Dowlada KMG ah ayaa tilmaamaya in si hoose loogu heshiiyay in Horjoogayaasha Muhaajiriinta ee dagaalada iyo gumaadka ka waday 2-dii sano ee ugu dambeysay ay baaqyo tilmaamaya iney cafis yihiin u diray, dhowaanahaan ayaa sidoo kale magaalada Muqdisho ayaa la isla dhex maraayay in Madaxda Dowlada KMG ah qaarkeed ay Dowlad reer galbeed ah ay kula heshiiyeen in aan wax dembi ah loo raacan kuwii xasuuqa ka waday Konfurta Somaliya, Su’aashuse waxey tahay Miyee Cafin karaan Xubnahaan lagu Ilaaliyo Madaxtooyada Horjoogayaasha Muhaajiriinta & kuwa Soomaalida.
Suldaanka Beesha Shiikhaal Oo Gaalkacyo Soo Gaaray. Sayladda Cod-gadashada Soomaaliya